The Whispered World, Mac အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်များအတွက်ရောင်းချ | ငါက Mac ကပါ
အဆိုပါတိုးတိုးကမ္ဘာ့အထူး Edition ကို များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းရှိပါတယ်သောစပိန်အတွက်ဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည် 21,99 €နှင့်သာများအတွက်အလွန်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက် 4,99 € သင်ဤအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုခံစားနိုင်ပါတယ်။ 'Whispered World Special Edition' တွင်ကမ္ဘာကြီး၏ကံကြမ္မာသည်ကြိုးမျှင်ဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားပြီးထူးဆန်းသောသူရဲကောင်းတစ် ဦး ပေါ်လာသည်။ ကာတွန်းအသေးစိတ်များနှင့်စိတ်ကူးဇာတ်ကောင်အများကြီးနှင့်အတူအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စွန့်စားမှုဂိမ်း။ ၏စွန့်စားမှု ဆက်ဒ်ဝစ် (အဓိကဇာတ်ကောင်) သူသည်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်တော့မည့်အချိန်မှစတင်ခဲ့သည် အိပ်မက်ဆိုး သူဟာသူ့အိပ်မက်တွေထဲမှာသူ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာပြိုလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အပြာရောင်နယ်ပယ်တစ်ခုကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်။ သူတို့၏ခံစားမှုကိုအခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကမ်းလှမ်းထားသောဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအပေါ်အခြေခံထားသည့်အမာခံပဟေpurိဂိမ်းသည်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ စပိန်ဘာသာဖြင့်မိတ်ဆက်.
Shana (the oracle) ကသူ၏အဆိုးရွားဆုံးသောကြောက်ရွံ့မှုများသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရုံသာမက Sadwick သည်သူ၏ပျက်စီးခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ အနာဂတ္တိကျမ်းကိုကြည့်ရှုပါ။ ဒီထုတ်ဝေမှုတွင်အထူးဝေဖန်ချက်များပါဝင်သောအသံဝေဖန်ချက်များပါဝင်သည် ဇန်နဝါရီ Poki Müller-Michaelis y Marco Hüllenအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် သော့ဖွင့်အောင်မြင်မှုများ.
ဂိမ်းစာရေးဆရာများဖြစ်သော 'Poki' နှင့် Marco Hüllenတို့နှင့်သီးသန့်သီးသန့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။
updated: 01/10/2014 ။
ဗားရှင်း: 2.1.5.0358 ။
ဘာသာစကား: စပိန်, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီ, ပိုလန်, ရုရှား။
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Daedalic ဖျော်ဖြေရေး Gmbh © 2014 Daedalic ။
The Whispered World Special Edition မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါ Mac က App Store ကိုအောက်ပါ link ကိုမှ။ ၎င်းသည်အလွန်လှပသောဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်အသေးစိတ်ကျသောဒီဇိုင်းနှင့်သင်ဝယ်ယူလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » တိုးတိုးပြောထားသောကမ္ဘာ့အထူးထုတ်ဝေမှု၊
MacUpdate ကိုသုံးသောအခါသတိပြုပါ adware တိုင်ကြားချက်